झापामा शनिबार यो वर्षकै चिसो! :: चन्द्र काफ्ले :: Setopati
झापामा शनिबार यो वर्षकै चिसो!
विनोद सापकोटा झापा, पुस २३
केही दिनयता बढेको सितलहरका कारण झापाको जनजीवन कष्टकर बनेको छ। शनिबार पश्चिमी सिरेटोसँगैको चलेको सितलहरले झापाका अधिकांश ठाँउका स्थानीय नराम्ररी प्रभावित भए। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार शनिबार यस वर्षकै चिसो दिन हो।
कन्काई सिचाँई प्रणालीमा मापन गरिएको रेकर्ड अनुसार शनिबार बिहान जिल्लाको न्युनतम तापक्रम ७.५ डिग्री सेल्सीयस र अधिकतम तापक्रम २४ डिग्री सेल्सीयस मापन गरिएको थियो। यस्तै शनिवार साँझ को न्युनतम तापक्रम ८.५ डिग्री सेल्सीयस र अधिकतम तापक्रम १२.५ डिग्री सेल्सीयस मापन भएको केन्दक्री कर्मचारी भोजकुमारी खतिवडाले बताईन्।
२०७३ पुस १३ गते झापामा तिन वर्ष यताकै अधिकतम चिसो भएको थियो। खतिवडाका अनुसार त्यसताका ४.५ डिग्रीमा तापक्रम झरेको थियो।
पश्चिमी वायुको प्रभावले झापाका अधिकांश बजार शनिबार प्रभावित भए । गौरिगञ्ज , गौरादह, दमक, झिलझिले, सुरुङ्गा, विर्तामोड, धुलावारी, काकडभिट्टा, भद्रपुर, शनिश्चरे, बगान लगायतका मुख्य बजार नराम्ररी प्रभावित भएका थिए।
बिहानैदेखी चलेको सिरोटेले जिल्लाका बजारमा खोलिएका एकाध पसलका संचालकले आगो वालेर तापेका देखिन्थे।
राजमार्गमा सधाझै सार्वजनिक तथा निजी सवारीका साधन खासै संचालन हुन सकेनन्। कतिपय यात्रुवहाक वस यात्रुका अभावमा खाली गुडिरहेका थिए। दुई पांग्रे यातायातका साधन पनि जिल्लामा शनिबार खासै सञ्चालनमा आउन सकेनन्।
बाक्लो हुस्सु र शितलहरका प्रभावले ती साधन संचालन गर्न कठिनाई भएको शिवगञ्जका राम जनम चौधरीले बताए। बाक्लो हुस्सूले राजमार्गमा पनि सुरक्षा चुनौती थपिएको छ।
५ मिटर दुरी पनि नदेखिने गरि शनिबार शिवसताक्षीमा हुस्सु लागेको थियो। राजमार्गमा संचालन हुने अधिकाँस यातायातका साधनका चालकले साईडलाईट (ईन्डीकेटर) फक्स लाईट बालेका देखिन्थे।
निषेध गरिएको हर्न पनि शनिबार यातायातका साधनले प्राय बजाएका थिए ।
पश्चिमी वायुको प्रभावले देशभर अझै चिसो बढ्न सक्ने जल तथा मौसम विज्ञान विभागका मौसमविद् सुजन सुवेदीले सेतोपाटीलाई बताए। ‘पानी पर्ने सम्भावना बढेकाले अझै चिसो हुन सक्छ,’ सुवेदीले भने, ‘कति डिग्रीसम्म तापक्रम झर्छ भन्ने अनुमान गरिएको छैन । तर, चिसो बढ्न सक्छ ।’
सुवेदीका अनुसार पश्चिमी वायु बिस्तारै पश्चिम नेपाल हुँदै पूर्वतिर गएकाले मध्य र पूर्वी नेपालका अधिकांश जिल्लामा छिटफुट वर्षा हुन सक्नेछ।
पश्चिम नेपालका केही ठाउँमा पनि वर्षा हुनसक्ने अनुमान छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले तराईमा शीतलहरबाट कसैको मृत्यु भएको सूचना नआएको बताए। ‘तराईमा चिसोबाट मृत्यु भएको हुन सक्छ । तर, शीतलहरबाट एकजनाको मृत्यु भएको छैन,’ पन्थीले भने।
प्रकाशित मिति: आईतबार, पुस २३, २०७४, ०७:३४:४३